Cilmibaadhis cusub: Aragtida gudniinka oo isbedelayasa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hodan Toosh waa gabadh lagu guday da´da 11 jir. sawir: Muna Ismaaciil /Sveriges Radio
Cilmibaadhis cusub: Aragtida gudniinka oo isbedelayasa
Badankood soomaalida Sweden wey ka soo horjeedaan gudniinka hablaha
La daabacay fredag 6 oktober 2017 kl 15.27
Inta badan soomaalida Sweden ku nool ayaa ka soo horjeeda gudniinka hablaha, sida lagu ogaaday baadhitaan dhawaan laga sameeyey arrintan.
Baadhitaankan ayaa waxa sameeyey cilmibaadhayaal ka hawlgala jaamacada Uppsala, waxaana lagu baadhay aragtida ay soomaalida Sweden degen ka haystaan guudniinka hablaha. Ku dhawaad 400 oo qof, oo ka kooban dad Sweden mudo badan degenaa iyo dadka ku cusub oo 4 sano in ka yar degenaa waddankan, ayaa laga wareystey aragtidoodda la xidhiidha arrimaha gudniinka. Natiijadu waxay muujinaysaan in 95% ay ka soo horjeedaan gudniinka hablaha.
Birgitta Essén oo ah cilmi baadhe ku takhasustay caafimaadka haweenka kana mid ah cilmibaadhayaasha baadhitaankan sameeyey ayaa sheegtay in ay jiraan baadhitaano kale oo tusaya in gudniinka hablaha uu soo yaraanayo. Arrintan oo noqon karta mid ka mid ah sababaha ay dadka waddanka ku sucub ee baadhitaankan ka qeeyb qaatahay uga soo horjeedaan gudniinka.
-Waxa jira baadhitaano kale oo sii xoojinaya natiijada baadhitaankan oo muujinaya in ay jiraan calaamado tusaya in aragtida soomaalida ee gudniinka hablaha ay isbedelayaso. Looma baahna in hablaha la gudo si loo gaadho hadafkii laga lahaa oo ah in ay bulshadu aqbasho gabdhahan, ayey tidhi Birgitta Essén.
Hodan Toosh waxa gudniinka lagula kacay markii ay jirtay 11 sano. Hodan waxay natiijada cilmi baadhistan u aragtaa wax la filaayey.
- Dadku waxa ay yeesheen aqoon, dabcan waana sababtaa waxa ay uga soo horjeedaan gudniinka hablaha hadda. Waxa la doonayaa oo keli ah in la maamulo gabdhaha. Maya, anigu ma rabo in gabadhayda ay wixii i soo maray ku dhacaan ayey tidhi Hodan Toosh.
Bita Eshraghi oo ka hawlgasha cisbitaalka Södersjukhuset ee magaalada Stockholm, qeeybtiisa xanuunada dumarka, ayaa sheegtahay in ay fiican tahay horumarka baadhitaankan muujinayo, balse ay tahay in aan la ilaawin xaaqiida hada jirta.
- 38 000 dumar ah ayaa maanta la nool gudniin. Waana wax ay adag tahay in laga hadlo oo lafdhabarta dadka ku jira.